Madaxweyne Mustafe Oo Caddaystay Inuu Qaaday Waddadii Cabdi Ilay Iyo Falalka Argagaxa Leh Ee Boobka, Xadhiga Iyo Cabudhinta Ee Uu Ku Kacay - Jigjiga Online
HomeSomalidaMadaxweyne Mustafe Oo Caddaystay Inuu Qaaday Waddadii Cabdi Ilay Iyo Falalka Argagaxa Leh Ee Boobka, Xadhiga Iyo Cabudhinta Ee Uu Ku Kacay
Madaxweyne Mustafe Oo Caddaystay Inuu Qaaday Waddadii Cabdi Ilay Iyo Falalka Argagaxa Leh Ee Boobka, Xadhiga Iyo Cabudhinta Ee Uu Ku Kacay
Jigjia (JO) – Ku-simaha Madaxweynaha Dawladda Deegaanka Soomaalida, Mustafe Muxumed Cumar ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey ku kacayay falal argagax leh oo uu ku bartilmaameedsanayo ehellada iyo hantida shaqsiyaadka xukuumaddiisa dhaliila.
Ku-simaha Madaxweynaha Deegaanka, Mustafe ayaa waxa uu maanta xabsiga dhigay hooyo Maryan Maxamuud oo da’ ah iyo Ayaan Muxumed Colaad oo ah hooyada dhashay Maxamed Colaad iyo walaashii, kuwaas oo gellinkii hore ay ciidamo hubaysan qaab fool xumo ah ula dhaqmeen kaddibna xabsiga geeyeen.
Mustafe Cagjar waxa kale oo uu amar ku bixiyey in la dumiyo dhismeyaal ku yaalla dhul uu leeyahay Maxamed Colaad oo uu sharcigiisii haysto, sifo sharci ahna ku muliyey, taas oo si cad u muujisay in Mustafe uu ku taagan yahay dariiqii Cabdi Ilay oo wixii uu isaga iyo dadka kaleba ku sameeyey uu markiisa tijaabinayo.
Maxamed Colaad oo hore u ahaa lataliyaha Mustafe ee dhinacyada saxaafadda iyo Isgaadhsiinta, kana mid ah siyaasiyiinta dhaliilla xukuumadda ayaa laba maalmood ka hor guri ay dawladdu leedahay oo uu ka deggenaa magalaada Jigjiga waxa salaad hore sifo sharci darro ah ku galay ciidamo tiradoodu ka badnayd 30 oo si toos ah looga soo diray Madaxtooyada, kuwaas oo jajabiyey wixii alaab guriga taallay kaddibna dibedda kusoo daadiyey.
Waxa intaa ka horreysay in Maxamed Colaad qaab sharci-darro ah habeen madow gurigiisa loogu daatay oo loo xidhay, iyadoo loo geystay jidh-dil, lana sii daayay markii loo waayey wax lagu eedeeyo.
Aqoonyahan Siraaje Aadan ayaa isagana saq-dhexe ay ciidamo u dhaceen gurigiisa kaddib markii uu baraha bulshada ku baahiyey muuqaal uu kusoo bandhigayo goldaloolooyinka xukuumadda iyo musuqyada ay gashay.
Waxa kale oo iyaguna jira dad kale oo shacab ah oo hantidooda ay xukuumadda Mustafe boobtay, kuwaas oo uu ugu dambeeyey Muwaadin curyaan ah oo dhul uu ku leeyahay magaalada Jigjiga uu sarkaal ciidamada ka tirsan xoog kaga qaatay oo uu ugu hanjabay inuu xabbad ku dhufan doono haddii uu soo dhex istaago.
Dhaqamada noocan ah oo looga bartay Madaxweynihii uu Mustafe Cagjar xilka ka beddelay ee Cabdi Ilay ayaa waxay shacabka deegaanka u muujiyeen sawir ah in muddo ka yar laba sannadood uu ku qaaday dariiq kalitaliyenimo oo nacayb iyo aargoosi ka muuqdo.
Si kastaba, Mustafe Cagjar oo eedaymo musuqmaasuq iyo ku-tagrifal awoodeed ay dul hoganayaan, ayaa waxa uu u muuqdaa in waxyaabo badan oo lagu xaman jiray ay hadda kasoo ifbaxeen, waxaana la eegi doonaa tallaabooyinka xiga ee uu qaado iyo dadka kale ee bartilmaameedka u ah ee uu xadhigga iyo boobka hantidooda damacsan yahay.